Shiinaha PROTMEX PT20A Weather Station Digital Wireless Bannaanka Dibadda Heerkulbeegga Saadaasha Cimilada ee warshad iyo soosaarayaasha Barometer Cimilada | Ilaali
PROTMEX PT20A Weather Station Digital wireless wireless gudaha banaanka heerkulbeegga Hygrometer Saadaasha Hawada leh Barometer Weather Stations
Saacadda rugta cimilada ayaa baari karta cimilada / heerkulka / huurka / waqtiga, shaashadda weynna waxay kuu oggolaaneysaa inaad yeelato saameyn muuqaal oo wanaagsan.
1 Kalandarka joogtada ah;
2 RCC function (Kaliya RCC nooca cimilada ayaa leh shaqadan);
3 Saacadda aagagga badan leh, nooca DCF wuxuu taageeraa aagagga waqtiga waa aagga waqtiga EU-da (Kaliya RCC nooca cimilada ayaa leh shaqadan);
4 Bandhig toddobaadle ah, taageer 7 luqadood (Ingiriis, Jarmal, Talyaani, Faransiis, Isbaanish, Dutch, Daanish)
5 Saacadda alaarmiga ee shaqsiga ah, waxaa la dejin karaa wicitaanada maalmaha shaqada, maalmaha fasaxa ama maalin kasta, waxayna leedahay shaqo saacad qaylo dhaan ah;
6 Dayaxa wajigiisa;
7 Waxqabadka saadaasha hawada;
8 Waxqabadka cabbirka heerkulka iyo huurka, taageer Celsius iyo Fahrenheit;
9 Heerka cabbirka heerkulka ee qaataha calaamadda: -9.9 ℃ ～ 50 ℃ (14.2 ℉ ～ 122 ℉); marka heerkulku ka sarreeyo 50 ℃, shaashadda ayaa soo bandhigaysa "HH.H"; markuu ka hooseeyo -9.9 ℃, wuxuu soo bandhigi doonaa "LL.L" ";
10 Heerka cabbirka heerkulka dareeraha dareeraha: -40 ° C illaa 70 ° C (-40 ° F ～ 158 ° F); marka heerkulku ka sarreeyo 70 ° C, shaashadda ayaa soo bandhigaysa "HH.H"; markay ka hooseyso -40 ° C, waxay soo bandhigtaa "LL.L" ";
11 Qaybta cabbirka qoyaanka iyo dareeraha: 20-99%; marka qoyaanka hawadu ay ka sarreyso 99%, shaashadda ayaa soo bandhigeysa "HH"; markay ka hooseyso 20%, waxay soo bandhigtaa "LL";
12 Baaxadda cabirka cadaadiska hawada: 800 ～ 1100 hPa, baaxadda qaladka: ± 2hPa, iyo nidaamyada unugyada la taageeray waa: hPa / mb / inHg / mmHg;
13 Isbedelka xogta ee heerkulka gudaha iyo dibedda / qoyaan / cadaadiska hawada;
14 Heerkulka ugu sarreeya uguna yar ee wax duuba;
15 Heerkulka dhibcaha dharabka;
16 Qalabka digniinta qabow;
17 Waxqabadka digniinta heerkulka;
19 Tixraacyada gudaha ee muujinta dhibcaha;
20 Qalabka qaataha PT20A wuxuu isku xiri karaa ilaa 3 dareemayaal signaar isla waqti isku mid ah, wuxuuna soo bandhigi karaa xogta dareemayaal kasta shaashadda qalabka wax lagu qaato ee qaab carousel ah;
21 Qalabka digniinta batteriga oo hooseeya;
22 LCD gadaal;
23 Awood koronto: Qalabka wax lagu qaadaa wuxuu u baahan yahay 3 baytari oo leh qeexitaan "AAA (LR 03)" ama adabtarada korontada oo leh qeexitaanka "DC 5V"; dareeraha wireless wuxuu kaliya ubaahanyahay 2 baytariyada oo leh qeexitaan "AAA (LR 03)".
1. Naqshadda shaashadda weyn waxay leedahay saameyn muuqaal oo wanaagsan;
2. Asalka waa muuqaal dabiici ah, oo dadka ka dhigaya inay dareemaan inay joogaan baadiyaha, waxayna doonayaan inay ku eegaan;
3. Badeecadu waxay leedahay shaqooyin hodan ah, waxaad eegi kartaa jadwalka, waqtiga, heerkulka, huurka, Saadaalinta cimilada, dejiso saacadda alaarmiga, iwm;
4. Adeegso alaabta ceeriin oo tayo sare leh oo aad ku dhaafto tayada
J: Protech International Group Co., Ltd waa mid ka mid ah hormuudka bixiyeyaasha xallinta Imtixaanka iyo Cabbiraadda Aasiya, oo ah sumcad mitir tijaabo sharaf leh oo Shiinaha ah Iyada oo xarumaha R & D ee Shenzhen, Protech waxay awood u leedahay soo saarida wax soo saar cusub, la isku halleyn karo, tayo sare leh, ammaan u ah isticmaalka, iyo alaab saaxiibtinimo leh. Suuqa caalamiga ah, Protech wuxuu iskaashi ka dhex sameeyay in ka badan 90 dal oo in ka badan 300 oo wada-hawlgalayaal u leh qaybinta wax soo saarka iyo adeegyada.
Hore: PROTMEX PTH-8 Smart Indoor Digital Air Detector la qaadan karo WIFI CO2 Meter
Xiga: PROTMEX PT201B Qoyaanka Heerkulka Bannaanka ee Gudaha RCC Clock PT20A Color Display Digital Weather Station Wireless
PROTMEX PT201C Bannaanka Bannaanka Gudaha LC ...